ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အန္တရယ်အများဆုံး ယုံတမ်း ၅ ခု | သိလိုရာမေး
နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာမယ် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အန္တရယ်အများဆုံး ယုံတမ်း ၅ ခု
ဒါကြောင့် သိလိုရာမေးကနေ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနဲ့ပက်သတ်ပြီး အပြောအများဆုံး အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ယုံတမ်းစကား ၅ ချက်ကို ဒီနေ့ ပြောပြပေးသွာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယုံတမ်းစကား ၅ – အမျိုးသမီးတစ်ချို့ကသာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချကြတယ်။
“ဒီလို မိန်းမမျိုးပေါ့ ၊ အဲ့ဒီလို မိန်းကလေးမျိုးပေါ့” ဆိုပြီး ပြောဆိုကြတာ သင်ကြားဖူးမှပါ။ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဆေးကုသမှုအပိုင်းမှာဆို အ‌ဆိုးဆုံး ၀ေဖန်မှု ကဲ့ရဲ့မှုအရှိဆုံး ဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာမရှိသလို ကိုယ်ဝန်ဖျက်ခဲ့တဲ့မိခင်တွေဆိုလည်း ဘဝမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားတစ်ခု အမည်းစက်လို ရှေးရိုးစွဲယူဆချက်တွေနဲ့ ဝေဖန် ဖိနှိပ်ခံကြရပါတယ်။
ဒီယုံတမ်းစကားက ဘာကြောင့် အန္တရာယ်များတာလဲ။
တစ်ဖက်သတ်ယူဆချက်တွေက အရှက်တရားကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ် ။ဒီအရှက်တရားတွေက အမျိုးသမီးတွေ ကျန်းမာရေးကုသစောင့်ရှောက်မှုရရှိဖို့ တောင်းဆိုတဲ့ အသံတွေကိုတိတ်သွားစေပြီး မမှန်ကန်တဲ့ လွဲမှားတဲ့ အ‌တွေ့အကြုံတွေကို ရစေပါတယ်။ ဒီ ယုံတမ်းစကားအကြောင်းအရာကလဲ အမျိုးသမီးတွေကြားထဲမှာ ကျန်းမာရေးကုသစောင့်ရှောက်မှု ရယူမှုအတွက် ကြီးမားတဲ့အတားအဆီးတခုအနေနဲ့ရှိနေပါတယ်။
နှစ်စဥ် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရဲ့ ၄ ပုံ၁ပုံဖြစ်တဲ့ ၅၆ သန်းလောက်က ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချကြပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင် ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အဆင့်အတန်းမရွေး ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းတွေရှိနေပါတယ်။
ယုံတမ်းစကား ၄ – ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းက နောက်ဆိုရင်ကိုယ်ဝန်ပြန်ရဖို့ခက်တယ်။
ကိုယ်ဝန်တော့ဖျက်ချချင်တယ် ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်း ကိုယ်ဝန်ပြန်မရနိုင်တော့မှာ ကို စိုးရိမ်နေပါသလား? ဒါက သင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး … အမျိုးသမီးအများစုဟာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီးရင် နောက်ပိုင်းကလေးမရနိုင်တော့မှာကို စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဒီယုံတမ်းစကားက အန္တရာယ်များတာလဲ။
ဒီယုံတမ်းစကားက လုံးဝကို မှားပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒါက အကြောက်တရားကိုဖန်တီးပေးပြီး ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုကို နားလည်မှုလွဲစေပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတာခြင်းကိုတိုက်ဖျက်သူတွေကတော့ ဒီယုံတမ်းစကားတွေကို ဖြန့်ပြီးတော့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရမလား? မိခင်ဘဝပဲရွေးချယ်ရမလား ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြား အမျိုးသမီးတွေကို တွေဝေစေပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဟာ နောက်ပိုင်းကိုယ်ဝန်ပြန်ရဖို့ခက်တယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီးပြီးချင်းမှာတောင် ကိုယ်ဝန်ပြန်ရနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီးနောက်ပိုင်း ကလေးပြန်မရချင်ဘူးဆိုရင် လိင်ဆက်ဆံမှုစတင်တာနဲ့ မိမိနဲ့သင့်တော်တဲ့သားဆက်ခြားနည်းတခုခုကိုအသုံးပြုဖို့စဥ်းစားသင့်ပါတယ်။ သားဆက်ခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ပက်သတ်ပြီး ဒီလင့်မှာhttp://www.findmymethod.org/ သွားရောက်လေ့လာဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ https://www.thiloyarmay.org/contraceptive-methods/
ယုံတမ်းစကား ၃- လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကို ဆေးရုံတွေမှာပဲ လုပ်လို့ရတယ်။
တခါတလေမှာ အမျိုးသမီးတွေက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖို့အတွက် ဆေးရုံသွားရမှာကို စိုးရိမ်ကြတယ် ။ ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေကတစ်ဆင့် သူတို့ရဲ့လျို့ဝှက်ချက်တွေပေါက်ကြားမှာ၊ အရှက်ရမှာတွေကို စိုးရိမ်ကြတယ်။ ဆေးရုံကဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ သွားလာရေး နဲ့ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းရရှိဖို့ဆိုတဲ့ အခက်အခဲတွေလည်းရှိနေပါတယ်။
တကယ်လို့ ဆေးရုံမှပဲ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေက လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ အခြား ကိုယ်ဝန်ဖျက်စရာနေရာတွေကို ရှာဖွေတော့မှာမဟုတ်ဖူး ။ သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်စရာတွေကို မသိရှိတာကြောင့် စိတ်မချရပြီးအန္တရယ်ရှိတဲ့နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကို အိမ်မှာပဲ ထိရောက်မှုရှိပြီး၊ လုံခြုံစိတ်ချစွာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ။အချက်အလက်တွေအရ အိမ်မှာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းက ဆေးခန်းတွေမှာ ဖျက်ချ / လုပ်သလိုပဲ စိတ်ချမှုရှိပါတယ် ။ အရေးကြီးတဲ့အချက်က မှန်ကန်တဲ့ဆေးကိုသုံးပြီးသင့်လျော်တဲ့လမ်းညွန်မှုကို လိုက်နာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် .. အရေးပေါ်အခြေအနေ အတွက် လိုအပ်လာရင် ပြင်ဆင်ထားရမယ့် back up plan https://www.howtouseabortionpill.org/before/#safety ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဥ်းစားရပါမယ်။
ယုံတမ်းစကား ၂- ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကို ဆန့်ကျင်ကြတဲ့သူတွေက ဖျက်ချပြီးနောက်ပိုင်း နောက်ဆက်တွဲပြသနာတွေနဲ့ပက်သတ်ပြီး ယုံတမ်းစကားတွေကို ပြောနေကြတာလဲရှိပါတယ် ။ ဒီယုံတမ်းစကားအရဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကိုပြုလုပ်တဲ့အမျိူးသမီးက နောက်ပိုင်းကျရင် သူမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို နောင်တရပြီး ၊အမြဲ အပြစ်ရှိသလိုစားနေရပြီး ဒါက သူမရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်များစွာသော ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီယုံတမ်းစကားကတော့ လုံးဝကို အကျည်းတန်လွဲမှားတာပါ။ ဒါက လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပက်သတ်ပြီး လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ပြစ်တင်ရှုံချမှုကိုပါ တိုက်တွန်းအားပေးရာရောက်တဲ့ မမှန်ကန်တဲ့ ယုံတမ်းစကားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလိုယုံတမ်းတွေက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေလက်ကိုင်ထားတဲ့ အကြောက်တရား စကားတစ်ခုဖြစ်ပြီး အရှက်ရသွားအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဥပမာပေးထားတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
များစွာသောလေ့လာချက်တွေအရ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာတွေက ဆက်စပ်မှုမရှိဘူးဆိုတာကို ပြောပြထားပြီးသားပါ။ Post abortion syndrome လို့ပြောကြတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီးနောက်ပိုင်းရင်ဆိုင်ရမယ့်လက္ခဏာတွေဆိုတာ ဆေးပညာမှာအသိအမှတ်မပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုလိုပါပဲ ။ဒါအပြင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုတွေပြုလုပ်လိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးများ အတွက် စိတ်သက်သာရာရဿွားတယ်လို့ စုက ပြန်ပြောပြထားတာတွေရှိပါသေးတယ်။
ယုံတမ်းစကား ၁- ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းက အန္တရာယ်များတယ်။
လုံခြုံမှုမရှိတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းက ကမ္ဘာပေါ်က အမျိုးသမီးသန်းပေါင်းများစွာရဲ့အသက်လုံခြုံ မှုနဲ့ သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကို ခြိမ်းခြောက်နေတယ်ဆိုတာ သိရပါမယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုတရားမ၀င်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းတွေ ဖြစ်ရခြင်းက သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံမရှိတာရယ်နဲ့ လိုအပ်တဲ့သင်တန်းမရှိတာတွေကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ ။ ဒီလို အမျိုးသမီးတွေအတွက် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲစိန်ခေါ်ချက်တွေကို ဒီလင့်လေးကနေတစ်ဆင့် https://www.howtouseabortionpill.org/ ပြောင်းလဲဖို့အများကြီး ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
ဒီယုံတမ်းစကားက ဘာကြောင့် အန္တရယ်များတာလဲ။
လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချနည်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို အခုလိုရရှိနိုင်သလို လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုရနိုင်ဖို့လဲ ကူညီမယ့်သူတွေရှိနေပါတယ် ။ အမျိုးသမီးတွေကို ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတာက အန္တရာယ်ရှိတာပဲလို့ပြောနေတာက သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်တွေကို ချိုးဖောက်ရာရောက်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိစ ပထမလတွေမှာ ဆေးဝါးနဲ့ကိုယ်ဝန်ဖျတ်ချခြင်းက လုံခြုံမှုရှိပါတယ်။ တကယ်လက်တွေ့မှာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချလိုက်တာဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကလေးမွေးတာထက်စာရင် ပိုပြီးလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိပါတယ်။
ဒါဆို ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ လွဲမှားနေမှုတွေကို အခုတော့သိသွားပြီပေါ့ … ဒီယုံတမ်းစကားတွေကလည်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာတကယ်ပြောနေကြပါသေးတဲ့အတွက် လူတိုင်း စိတ်ချရတဲ့ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို တယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြ ၊ ပို့စ်တွေရှယ်ကြ မျှဝေကြရင်း တလွဲအယူအဆမှားတွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်က လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ဆေးဝါးနဲ့ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းအကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိလိုတယ်ဆိုရင် ဒီလင့်မှာ https://www.howtouseabortionpill.org/ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ် ။ ပြီးတော့လည်းအောက်က ဆိုရှယ်မီဒီယာလင့်တွေဖြစ်တဲ့
Facebook Link: https://www.facebook.com/HTUabortionpill/
Instagram Link : https://www.instagram.com/htuabortionpill/
Twitter Link: https://twitter.com/HTUabortionpill
Pinterest: https://www.pinterest.com.mx/howtouseabortionpill/ တို့ကို ဖောလိုလုပ်ထားခြင်းဖြင့် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ မှန်ကန်တဲ့ အသိပညာတွေရယူနိုင်ပါပြီ။